Imomishi yeGcokama – Maskandi Media
Lo mshophi wokuhambela ubala ezweni elikude njengkapa lodumo lehlele abantu abaningi emculweni kaMaskandi. UKhuzani umfoka Mpungose uzithole esethola into akazohlekisa ngayo isonto lonke kwazise ubengayile yena lapho.
“Cha mina angihleki muntu bengizishuthela nje isithombe ngisebhanoyini ngazisa abantu ukuthi kunezinto okumele uzijwayeze ukuzibheka ngaphambi kokuba uzigijimele”.
“Lolu hambo lwaseKapa beluluhle kakhulu ukube alumoshwanga umhleli womcimbi. Ukuhleka into esazalwa ikhona futhi soze sife siyishiye. Angisho ukuthi ngihleka ngoba behambele ubala ngichazwa ukuthi lolu hambo nami bengingaya kulo kodwa ngathi no”.
“Lento ifana nokusinda engozini yemoto uma usale kade ekubiza udriver ethi woza sambe kanti uzoyifica amasondo esebheke phezulu ngaphambili”.
“Ngiyakhla kodwa nami ngikhala kanye nabo abafwethu obekumele beyodlala le kude behambe ngento ebiza kangaka indiza kanti azikho lo mcimbi le koKapa”.
“Idinga ukukhuzwa ke kodwa lento ngoba kuzodlalwa ngabacul bakithi ngoba kubonakala ukuthi ba desperate badinga ukudlala bese bebizelwa ubala kanje”.
“Ngibone ngekapisi kaQhosha ihleli endaweni engajwayelekile ngesikhathi ehla endizeni efika eThekwini kwabonkala ukuthi uzama ukufihla ubuso ukuze engabonwa zintatheli kanye mnabathandi bomculo akade ebaqhoshela ngokuya eKapa ngoba phela sithanda nokuqhosha singoQhosha”.
“Bonke abasho njengami abathi silinde uKhuba ngithi nje kuyeza lokho esikulindele angazi. Ngithi nje angazi ngoba yona iyeza kanti futhi izobe ikwelinye izinga. Angisyena ke min aumculi olokhu ekhuluma uma ezokhipha ngoba kade ngaba inkunzi”.
“Okuningi sbeyokuthola phakathi kwi cd uma isiphumile. Asihlangane kwiMpucuzeko lapho engizobe ngibenzela khona into yamehlo phela thina u-LIVE sesiphila ngawo”. Kubeka uKhuzani.
Previous Previous post: Unezikhalo ngamabhoza kaCothoza
Next Next post: Sengiqomile by Unjoko